Baarlamaanka Federaalka oo doonaya in sixitaan lagu sameeyo heshiiska Saldhiga Milateri ee Berbera | SAHAN ONLINE
Baarlamaanka Federaalka oo doonaya in sixitaan lagu sameeyo heshiiska Saldhiga Milateri ee Berbera
MUQDISHO – Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo gaaraya labaatameeyo ayaa sheegay in heshiiskii saldhiga milateri ee dowladda Imaaraatka iyo Somaliland kala saxiixdeen uu yahay mid xadgudub ku ah siyaasadda iyo guud ahaan qaranimada Soomaaliya.
Xildhibaanadan ayaa ku eedeeyey dowladda Imaaraatka carabta in ay tahay mid dhaawacaysa madax bannaanida Soomaaliya.
Mooshin ka dhan ah heshiiska ayaa loo qeybiyey xubnaha Baarlamaanka iyadoona xildhibaanada soo gudbiyey mooshinka ay sheegeen in heshiiska uu muran badan ka dhexdhaliyey gudaha Somaliland aadna looga soo horjeestay isla markaana ay cadaatay in khasab lagu meelmariyey.
Heshiiskan wuxuu khilaafsan yahay mabaadi’da dhowrista madaxbaaniada qaranka Soomaaliyeed iyo khatarta siyaasadeed iyo mida milateri oo Soomaaliya iyo mandaqada geeska afrika uga imanaysa arrinta la xiriirta bixinta saldhiga militeri ee Berbera” ayaa lagu yiri mooshinka loo gudbiyay barlamaanka
Xildhibaanadu sidoo kale waxa ay sheegeen in heshiiskan uu walaac ku dhaliyey kadib markii ay ogaadeen in uu khilaafsan yahay kana soo horjeedo Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Falka ay ku kacday dowladda Imaraadku Carabta wuxuu ka soo horjeeda midnimada iyo qaranimada JFS, dhaawacayana kalsoonida iyo xiriirka wanaagsan ee walaatinimo iyo iskaashi oo soojireenka ahaa ee ka dhexeeya JFS iyo Dowladda Imaaraadka” ayaa lagu yiri mooshinka.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa dowladda Federaalka usoo jeediyey in ay wadahadal saxitaan ah kala yeelato dowladda Imaaraatka carabta heshiiska Berbera iyadoo la dhowrayo mabaadi’da qarameed ee ay ku dhisan tahay Jamhuuriyadda Federaalka.